UZandie ubonga uthando ngengoma
UZANDIE Khumalo useveze ukuthi umculo yinto asazoqhubeka ajabulise ngayo abalandeli bakhe njengoba ezokhipha ingoma namhlanje nangoJuni Isithombe: SIGCINIWE
NOKUBONGWA PHENYANE | February 14, 2020
UTHEMBISA abantu lukhulu uZandie Khumalo namhlanje okhiphe ingoma ethi Akwanele.
Le ngoma aveze ukuthi isiqalile ukuzwakala emisakazweni, ikhuluma ngothando nokubonga abantu obathandayo noJehova ngezinto ezehlukene ezinhle.
“Lena ngenye yezingoma ezimbili engihlele ukuzikhipha kulo nyaka. Enye yazo izolandela ngoJuni njengoba ngizimisele ngokuqhubeka ngijabulise abathandi bomculo wami. Lena ngiyicula ngokuhlanganyela noLindani osezakhele igama emculweni.
Isigqi abazosizwa kuyona esijwayelekile ezingomeni zami kodwa kukhona nesigqi sezingoma zesonto engicabanga ukuthi abantu yinto abazoyijabulela kakhulu,” kuchaza uZandie.
Uthe selokhu angena emculweni uyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba ebe muhle kuyena futhi wamkhipha ezintweni eziningi.
“Ngeke ngande kakhulu ukuthi izinhlelo ezinye zimi kanjani emculweni kodwa ngingasho ukuthi i-albhamu yami sengiyiqedile, sengilinde nje ukusho ukuthi iphuma nini futhi konke lokho ngizoholwa wumoya ukuthi ngikumemezele kubalandeli bami,” kuchaza uZandie.
Ebuzwa ukuthi akazisoli yini ngokuhlala isikhathi eside engangeni emculweni njengoba ayedansela udadewabo uKelly Khumalo, uZandie uthe konke kunesikhathi sakho.
“Mhlawumbe ngaleso sikhathi izinto zazingeke zilunge futhi zihambe kahle njengoba kwenzeka manje. Akukho engizisola ngakho uJehova wenze izinto zami zaphindaphindeka endimeni yomculo konke kwahamba kahle,” kuchaza uZandie.